🍉 (@Jiang__)'s conversations - Wattpad
If you think the terrorist acts of MAL is right , press unfollow button and stop reading my translation works !
And I deeply respect all the people who stand for justice and truth ♡
We will win this fight !
သာသာေရthe legendary master's wifeကို ch-273ကေန320အထိဘယ္ကေနဖတ္လို႔ရလဲဟင္ရွာေနတာေတာ္ေတာ္ၾကာၿပီမေတြ႕လို႔
@GreenYusana 232 ကေန 272 ထိေရးၿပီးေနတဲ့အစ္မေတာ့ ရိွတယ္ရယ္ ။ အိုင့္ RL ထဲမွာရွာၾကည့္ပါေနာ္ 273 ကေန 320 ကေတာ့ ကိုယ္လည္းမေတြ့ဘူးေရာ္
သာသာရေ စာတွေဒီ့ထက်အများကြီးရေးသင့်တယ် ဘာသာပြန်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ သာသာ့က စိတ်ကူးဉာဏ်အရမ်းကောင်းလွန်းတယ် အရေးအသားက ဖတ်လိုက်တဲ့သူအတွက် ရှင်းခနဲလင်းခနဲပဲ ဘာသာပြန်တာဆိုရင်တောင် မူရင်းအာဘော်မပျောက်ပဲ ရေးရတာမှန်ရင်တောင် ဘာသာပြန်သူရဲ့ ရေးဟန်ဆိုတာ ရှိတယ် အဲ့ဒီ့ ရေးတဲ့ဟန် သာသာအရမ်းကောင်းတယ် ဒီ့ထက်ပိုအများကြီး ရေးသင့်တယ် ဘယ်စာအုပ်ဖြစ်ဖြစ်ပါ သာသာ‌ေရးတာ‌ေတွဖတ်ချင်လို့
@moenaylay မဟုတ်တာ. . အမှန်တိုင်းပြောရရင် ဆက်မရေးဖြစ်တော့တာက နောက်ပိုင်းchapter တွေအတွက် ဝေါဟာရအသုံးအနှုန်းတွေအပေါ် ယုံကြည်ချက်မရှိတော့လို့ရယ် TT အများကြီးလိုအပ်ချက်ရှိနေတာကို ဖတ်ပေးကြလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ^^ ♡♡
Oct 30, 2020 • Reply
@moenaylay LMF7အုပ်ကို7ယောက်ရေးတာဖတ်ပြီးမှ ပြောတာပါ သာသာရေ နောက်ထပ်စာအုပ်တွေ အများကြီးရေးပါဦးနော် ဒါမှမဟုတ် ဘာသာပြန်ပေါ့ မဟုတ်ရင် နှမြောစရာကြီး
@GuRin__ ဘယ်က မကောင်းရမှာလဲ အကောင်းဆုံးပဲဟာကို အခုတောင် LMW အကြောင်း တွေးနေရင်းနဲ့ အသစ်မတင်တော့ဘူးလားဆိုပီး သတိရလို့ လာကြည့်တာ  ㅠㅠ စာမရေးတာကြာပီလား ဆက်ရေးပါဦး ㅠ
သာသာ ရေ LMWလေး မupdate တော့ဘူးလားဟင်။...
ငါသာရယ္​ LMW update ​ေပးပါ ​ေမ်ာ္​​ေနပါတယ္​☺☺
သာသာ ေရ႕ ❤
တင္ေပးပါေနာ္ ေမၽွာ္ေနပါတယ္ေနာ္ ❤
အရမ္း အရမ္းခ်စ္တယ္ေနာ္ ❤
သာသာရေ LMW လေး မျှော်နေပါတယ်ရှင်!!!
LMW လေးကို translate ဆက်မလုပ်တော့ဘူးလား
@Phoenix-Tz နောက်အပိုင်းကရေးနေတာ ရေးလို့ကိုမပြီးသေးတာအစ်မ ><